IQOption - iqoption.com ကုန်သည်များအတွက် login၊ sign up လုပ်ရန်အကြံပြုချက်များ & သတင်းမဂ္ဂဇင်း
IQ Tools များ
Affiliate Program ကိုသတင်း
သင့်ရဲ့မြို့တော်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Binary နှင့် Digital Options များကို EU တွင်တားမြစ်သည်။
European Securities and Markets Authority (ESMA) ၏တောင်းဆိုမှုအရ binary နှင့် digital options ကုန်သွယ်မှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဖောက်သည်များအတွက်သာရရှိနိုင်သည်။
$ 1 အနည်းဆုံးသဘောတူညီချက်
$ 10 အနည်းဆုံး Deposit
$ 10,000 နှင့်အတူအခမဲ့သရုပ်ပြစစ်ဆေးပါ
အန္တရာယ်သတိပေးချက် - သင်၏အရင်းအနှီးသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်
IQ Option ပွဲစားတွင်အလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းနှင့်ပညာရေးကဏ္ education ရှိသည်။ signero လုပ်ပြီး၎င်းကိုစစ်ဆေးရန် traderoom သို့ login လုပ်ပါ။
💳ဒက်ဘစ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်🏪 ၂၄/၇ ပံ့ပိုးမှု📱 Cross-platform အက်ပလီကေးရှင်း buy တစ်ချပ်နှိပ်ဝယ် cry crypto 🏦လိုင်စင်ရပွဲစား
IQ Option သက်သာခွင့်များကိုကြည့်ပါ
IQ Option ပွဲစားကုန်သွယ်ရေးမဂ္ဂဇင်း - အတွက် အိုင်ကျူ option ကို စတော့အိတ်ရောင်းဝယ်သူများ။
ဒါကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အိုင်ကျူ option ကို အကြံပြုချက်များနှင့်သတင်းများနှင့်အတူကုန်သွယ်ပေါ်တယ်။
အိုင်ကျူ option ကို ပွဲစားကုန်သွယ် - မှတ်ပုံတင်ရန် အိုင်ကျူမဂ္ဂဇင်း - faq၊ ဗီဒီယိုများ၊ ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်တွဲဖက်အကြံပေးချက်များ
iqoption.com ကုန်သည်များနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအကြံပေးချက်များနှင့်သတင်းများ ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း - ပြန်လည်သုံးသပ် IQOption (ယခင် Binary Options ပွဲစား)
ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်တွင်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ အပြောင်းအလဲများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ IQoption သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ မြန်ဆန်ရန်၊ တိကျရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်အမြဲကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။ IQ Option ပလက်ဖောင်းတွင်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်သင်ယူမှုအရင်းအမြစ်များစွာရှိသည်။
စတော့ရှယ်ယာများ၊ ETF များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများရှိ CFD များ၊ Cryptocurrencies, Forex နှင့် Options (Binary Options & Digital Options) CFDs
IQOption ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သောဝန်ဆောင်မှု၊ ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကသူတို့ကိုလူကြိုက်အများဆုံးပွဲစားများဖြစ်လာစေသည်။ သူတို့သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည့်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ယနေ့အထိ IQOption သည်သန်းပေါင်းများစွာသောကုန်သည်များကိုစုဆောင်းပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်း sign up လုပ်နေကြသည်။ IQOption သည်မကြာသေးမီက၎င်း၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီး၊ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် CFDs များကိုအစုရှယ်ယာများနှင့် ETFs များပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်သည်။ Forex trading နှင့်သီးသန့် IQOption ထုတ်ကုန်ကိုရယူနိုင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် Options ကို & Binary Options ကို သာမှရရှိနိုင်ပါသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် clients များ။ ပလက်ဖောင်းတိုးတက်မှုအပြင် IQoption သည်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များစွာကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် IQoption သည်ကုန်သည်များအားလုံးကိုအဆုံးစွန်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပေးအပ်ရန်ကတိပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ IQoption ဖောက်သည်များသည်ငွေကြေးအတွဲများ၊ အွန်လိုင်းအတွဲများ၊ စတော့ရှယ်ယာများအပေါ် CFDs၊ ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် CFDs၊ cryptocurrencies ပေါ်ရှိ CFDs၊ ETFs ပေါ် CFDs၊ Bitcoin, Litecoin (နှင့်အခြားအများအပြား) နှင့် Cryptocurrencies၊ Professional ကလိုင်းများမှသာရရှိနိုင်ပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
မစောင့်ပါနဲ့ ယခု IQ Option အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးဖွင့်ပါ။ သင်လည်းaဖွင့်နိုင်သည် အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်။ လေ့ကျင့်ခန်းအကောင့်ကိုအရင်ကြိုးစားကြည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုပါတယ် IQ Option demo အကောင့်သို့အခမဲ့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
IQOPTION ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ - $ 10
အနည်းဆုံးကုန်သွယ်မှု: $ 1
Binary Options Return: မှန်ကန်သောခန့်မှန်းမှု (သို့မဟုတ်အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှု) ဖြစ်နိုင်လျှင် ၉၅% အထိ - အီးယူတွင်မရနိုင်ပါ။
ထောက်ပံ့မှု - ၂၄/၇
ငွေသွင်း / ငွေထုတ်နည်းများ - ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ Skrill၊ Neteller၊ Boleto, Qiwi, WebMoney, CashU, iDeal, Fasapay,
ပိုင်ဆိုင်မှုများ - ငွေကြေးအတွဲများ၊ စတော့များ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ကုန်စည်များ
နိုင်ငံများ - IQoption သည်ကနေဒါ၊ ဂျပန်၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ တူရကီ၊ အစ္စရေး၊ ဆီးရီးယား၊ ဆူဒန်၊ အောက်ပါနိုင်ငံများမှသုံးစွဲသူများသည် iOS မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှကုန်သွယ်မှုမပြုနိုင်ပါ - Malta; Android, Malta, Liechtenstein, ကျူးဘားများအတွက် Android application ကိုမရနိုင်ပါ။ (လက်ရှိလက်ခံထားသော / တားမြစ်ထားသောနိုင်ငံများစာရင်းအတွက်တရားဝင် iqoption ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအမြဲတမ်းဝင်ရောက်ပါ။ )
သရုပ်ပြအကောင့် - ဟုတ်ကဲ့၊ အခမဲ့လော့ဂ်အင်လုပ်ပါ
မိုဘိုင်း application: Android, iOS
ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း: ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ, သီးခြား app
ဘာသာစကားများ: အင်္ဂလိပ်၊ ရုရှား၊ တူရကီ၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ တရုတ်၊ ဆွီဒင်၊ ကိုးရီးယား၊ ပြင်သစ်၊
ထုတ်ယူခြင်း - အလုပ်ချိန် ၁ ရက်
ထောက်ခံနိုင်ငံများ (သို့မဟုတ်ကြောင်းခွင့်ပြုထားသောနိုင်ငံများဥပမာ) IQOptions သို့ဆိုင်းအင်လုပ်နိုင်သည်).
IQ Option (နိုင်ငံများ) ကိုမည်သူမှတ်ပုံတင်ပြီးဝင်နိုင်ပါသနည်း။
အောက်ပါနိုင်ငံများမှနေထိုင်သူများသည် IQ Option နှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ယူကေ (ယခု Brexit ပြီးနောက်မှတ်ပုံတင်ရန်မရှိသေးသော) နိုင်ငံများဖြစ်သောနယ်သာလန် (ကန့်သတ်ချက်များ)၊ ပေါ်တူဂီ (ကန့်သတ်ချက်များ)၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂရိ၊ အီတလီ၊ အိုက်စလန်နှင့်…
တောင်အာဖရိက၊ ဘရာဇီး၊ အာဂျင်တီးနား၊ ကော့စတာရီကာ၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မက္ကဆီကို၊ နယူးဇီလန်၊ ထိုင်း၊ ပီရူး၊ ချီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊
EU နှင့်အီးယူမဟုတ်သည့်နိုင်ငံများအကြား IQ Option ပွဲစားကဘာလဲ။
IQ Option Europe Ltd. သည် ESMA မှထိန်းချုပ်သည်။ အီးယူတွင်နေထိုင်သော iqoptions ဖောက်သည်များသည် ESMA ၏ပေါ်လစီများနှင့်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများကို အခြေခံ၍ ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ EU (European Union) တွင်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ခြင်းကို ESMA (European Securities and Markets Authority) မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သည့်နိုင်ငံများတွင် Binary Options ကုန်သွယ်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသနည်း။
ESMA သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးစရာများနှင့်ဒွိရွေးချယ်စရာများကိုအမှန်တကယ်တားမြစ်ထားသည်။ ဤအချက်က EU မှ iqoptions ကုန်သည်များ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးယူကုန်သည်များ မှလွဲ၍) သည်ဤတူရိယာများကိုလက်လှမ်းမမီကြောင်းဖော်ပြသည်။ ESMA မှခွင့်ပြုသောကြောင့်ကုန်သည်များသည် IX Option ဖြင့် FX ရွေးစရာများကိုကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ဥပမာ Binary နှင့် Digital Options ပိတ်ပင်ထားသောနိုင်ငံများဥပမာ။
ဒွိဒစ်၊ အီတလီ၊ ဖင်လန်၊ ဂရိ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုင်ယာလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ လတ်ဗီးယား၊ လူဇင်ဘတ်တို့က binary နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ရွေးစရာများကိုတားမြစ်ထားသည့်နိုင်ငံများ၏ဥပမာများမှာဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ သြစတြီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဘူဂေးရီးယား၊ မော်လ်တာ၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဆလိုဗေးနီး၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်နှင့်စလိုဗက်ကီးယား။
ESMA သည်လက်လီရောင်းချသောအီးယူကုန်သည်များအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောသြဇာပမာဏကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အီးယူပြင်ပမှကုန်သည်များသည်အီးယူမှကုန်သည်များထက်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ပိုမိုသုံးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပိုကြီးတဲ့အန္တရာယ်လည်းမရှိ။
မစောင့်ပါနဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီးယခုအကောင့်ဖွင့်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ IQ Option ကို log in လုပ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝဘ်ဆိုက်ကိုမွမ်းမံရန်ကြိုးစားသော်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များအတွက်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအမြဲ ၀ င်ရောက်လေ့လာပါ။ အထက်ပါအချက်အလက်များသည်ခေတ်နောက်ကျနိုင်သည်။
IQ Option ပွဲစားနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ဘေးကင်းပါသလား။ မင်းထင်မြင်ချက်ကဘာလဲ
IQ Option ဆောင်းပါးများ
IQ Option ပွဲစားသည်လုံခြုံစိတ်ချရသည့်အကြောင်းရင်းများစာရင်း။ ပါ ၀ င်သူများသည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုမျှဝေပါ IQ Option သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ... Europe ဥရောပရှိ CySEC မှရရှိသောလိုင်စင်သည်ပွဲစား၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၎င်းသည်တရား ၀ င်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည်။ 👍ရှိပါတယ် ...
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်နေ့တိုင်းကြော်ငြာကမ်းလှမ်းမှု ၅၀၀၀ ခန့်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ သူတို့ကိုသင်မည်သို့အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသလဲ။ အကြောင်းအရာကောင်းများရှိခြင်းသည်လူများသည်သင်၏တွဲဖက်ချိတ်ဆက်လိပ်စာများကိုနှိပ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဤတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှည့်ကွက်အချို့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ IQOption အကောင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်း / ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ် login မလုပ်နိုင်ခြင်း
IQoption မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ, အသားပေး, IQoption သတင်းနှင့်အကြံပြုချက်များ
သင်၏ IQ Option အကောင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ရသည့်အကြောင်းရင်းများရှိသည်။ ဘာလုပ်မလဲ? ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမဖြစ်ပါနှင့်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုဆိုင်းငံ့ထားပါက၊ သင်ပထမ ဦး ဆုံးအဆက်အသွယ်အထောက်အပံ့ကို login မလုပ်နိုင်ပါက။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များကအွန်လိုင်းဖိုရမ်များတွင်စစ်ဆေးသောလူကြိုက်များသောကြေငြာချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်သို့ဆိုင်းအင် ဝင်၍ မရပါ၊
ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုမည်သို့အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ် ၄ ခု
Affiliates သတင်းနှင့်အကြံပြုချက်များ, Affiliate Marketing ကို
အသုံးပြုသူများဘက်မှအင်တာနက်နှေးနေသလား။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများဖြစ်သော်လည်းသင်၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှေးကွေးမှုကြောင့်သင်၏အလားအလာရှိသောသုံးစွဲသူများက၎င်းကိုသဘောမပေါက်ပါကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ သင်သည်သူတို့၏ဆက်သွယ်မှုများကိုအရှိန်မြှင့် တင်၍ မရပါ၊ သို့သော်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ...
5 ခုနှစ်တွင်ကိုလိုက်နာရန် 2021 အွန်လိုင်း Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ
Affiliate Marketing ကို, Affiliates သတင်းနှင့်အကြံပြုချက်များ
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အကြံဥာဏ်များလျင်မြန်စွာထွက်ပေါ်လာသည်။ မည်သည့်အရာနှင့်ကပ်ရမည်ကိုသင်မည်သို့သိသနည်း။ IQ Option တွဲဖက်အဖွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအသုံးပြုမည့်သက်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာအချို့ကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ မည်သူကသင်သွားမည်နည်း။ 2021x ...
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှကုန်သည်သစ်များလက်ခံခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် IQ Option ။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏တွဲဖက်အားထုတ်မှုကိုအခြားနိုင်ငံများသို့ဆက်သွယ်ပါ။ လအနည်းငယ်အကြာ, IQ Option ကိုစည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကြောင့် IQ Option ကိုနေထိုင်သူများအားဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြား ...
အားလပ်ရက်များအပြီးတွင်သင်၏ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ကို IQ Option ဖြင့်ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်စစ်ဆေးရေးဂိတ် ၃ ခု။ အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်အချိန်ကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်ပါပြီ။ ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်ပြန်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ဤတွင်3နှစ်သစ်၏နှစ်သစ်သို့အစသို့မဟုတ်မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆိုစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။-) ထိပ်ကိုစစ်ဆေးပါ ...
စပိန်ဥပဒေမူဘောင်သည်ကုမ္ပဏီများအားစပိန်နိုင်ငံသားများအားဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများအားပါ ၀ င်ခြင်းအားတားမြစ်ထားသည်စပိန်ဘဏ္financialာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူ CNMV မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရသူတို့၏ဥပဒေမူဘောင်သည်ကုမ္ပဏီများမှ ...
IQOption သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဖြစ်သည်။
နှုတ်ဆက်, 2020! ဒီအားလပ်ရက်ရာသီကိုဂုဏ်ယူရသည့်အကြောင်းရင်း ၆ ခု - ၂၀၂၀ ၏တစ်ချက်တည်းကိုသာသတိရကြပါစို့။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လက IQ Option ကိုပိုမိုကြီးမားသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက်စုစည်းရန်၊ အချင်းချင်းကူညီရန်နှင့်ဖန်တီးရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ သင်၏သက်ရောက်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ IQ Option ...
ဗြိတိန်သည်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် EEA မှထွက်ခွာသွားသောကြောင့် IQ Option သည်ယူကေမှကုန်သည်များကိုလက်မခံနိုင်တော့ပါ။ ယူကေသည်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် EEA မှထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ယူကေစျေးကွက်၏ဘဏ္regulationာရေးစည်းမျဉ်းသည်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
အသွားအလာအသစ်အတွက် IQBroker iOS app
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောနိုင်ငံများအတွက် IQOption iOS သည်အခြားသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံများမှသုံးစွဲသူများအတွက် IQBroker iOS app သစ်ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအသွားအလာအားလုံးကိုစည်းမျဉ်းမကျသည့်နိုင်ငံများမှသုံးစွဲသူများအတွက် IQ Option အခြားရွေးချယ်စရာ IQ Broker iOS app သို့ညွှန်ကြားရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ...
လက်တင်အမေရိကနှင့်ဥရောပလက်တင်အမေရိကရှိခရစ်စမတ်ပွဲတော်များ၊ ပရိသတ်များသည်ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်များကိုမည်သို့ကျင်းပနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်၏ခရစ်စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးတို့၏ရိုးရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လေလံ - အနုတ်လက္ခဏာသော့ချက်စာလုံးအသစ်စာရင်း
အမှတ်တံဆိပ်လေလံခြင်း - အနုတ်လက္ခဏာသော့ချက်စာလုံးအသစ်များစာရင်း📰တစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန် (PDF) - ဂူဂဲလ်အမိန့်စာလုံးများအားအဂတိလိုက်စားမှုစာရင်းဇန်န ၀ ါရီလ ၂၀၁၁ တွင်နောက်ဆုံးရ - ရှာဖွေခြင်းကြော်ငြာတွင်ဆက်စပ်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထည့်သွင်းရန်။ ဝန်ဆောင်မှုများရှိနေသည် ...
ထရေးဒင်း Tools များ
စီးပွားရေးပြက္ခဒိန် - အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များ
ဒွိနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးစရာများကိုဥရောပယူနီယံမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သောကုန်သည်များသို့ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်တစ် ဦး မဟုတ်လျှင်ဤစာမျက်နှာကိုထားခဲ့ပါ။
CFD များသည်ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများဖြစ်ပြီး၊ သြဇာကြောင့်ပိုက်ဆံလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ CFD များရောင်းဝယ်သောအခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏အကောင့်များ၏ ၇၄ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားတွင်ငွေဆုံးရှုံးသည်။ CFDs များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ပြီးသင်၏ငွေဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုသင်တတ်နိုင်သလားစဉ်းစားသင့်သည်။
တရား ၀ င်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် / သို့မဟုတ်မြှောက်ကိန်းအဆင့်များသည် EEA နိုင်ငံများမှကုန်သည်များအတွက်မရရှိနိုင်ကြောင်းအကြံပေးလိုပါသည်။
European Securities and Markets Authority (ESMA) ၏တောင်းဆိုချက်အရ binary နှင့် digital options ကုန်သွယ်မှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်များအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဖောက်သည်များအတွက်သာရရှိနိုင်သည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြော်ငြာခြင်းသည် 18+ သာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်သွယ်မှု / လောင်းကစားကိုတာဝန်ယူပါ။
IQOption Affiliate အစီအစဉ်
IQ Option ၏တရားဝင်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
အပ်ငွေပြissuesနာများ - [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အစပြုသူများအတွက် Binary Options
IQ OPTION - Forex - အကြံပြုသော Forex ပွဲစား
Apple Store နှင့် Google Play စတိုးရှိ IQ Option လျှောက်လွှာ
IQ Option သရုပ်ပြအကောင့် | လော့ဂ်အင်
IQ Option အမှား - 404, 2503
IQOption ဆက်နွယ်သည့်အစီအစဉ်၊ လက်မှတ်ထိုး၊ ဝင်ငွေ၊ CPA ကော်မရှင်၊ ဝင်ပါ
IQOption Robot - IQ-Bot ဆော့ဝဲလ်စနစ် autotrading
Demo account မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဖွင့်ပါ
IQoptions.eu သည်တရားဝင် iqoption.com ၀ ဘ်ဆိုဒ်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည် iqoption.com မှပိုင်ဆိုင်သည်။ IQOptions.eu သည်တွဲဖက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး iqoption.com ကိုမြှင့်တင်သည်။ ကုန်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လင့်များမှတဆင့်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကော်မရှင်ရရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် IQ OPTION ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ သင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဝဘ်မာစတာနှင့်ဆက်သွယ်လိုပါကအီးမေးလ်ပို့ပါ။[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဆောင်းပါးများသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မူလဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုဆောင်းပါးများကိုကောင်းစွာဘာသာပြန်မထားလျှင်ဘာသာစကားပြောင်းပါ။ ၎င်းတို့သည်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအမြဲထင်ဟပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies များကိုသဘောတူသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများကိုဖတ်ပါ။
ဆက်သွယ်ရန် & ပံ့ပိုးမှု
လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အကောင့်များ၏ ၇၄ မှ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြသည် ဒီပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူ CFDs ကုန်သွယ်အခါ။ သင်၏ငွေဆုံးရှုံးမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးစွန့်စားနိုင်မလားစဉ်းစားသင့်သည်။
အထွေထွေအန္တရာယ်သတိပေးချက် - ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြော်ငြာထားသောဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်သင်၏ရန်ပုံငွေအားလုံးဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်မဆုံးရှုံးနိုင်သောငွေကိုသင်ဘယ်သောအခါမျှမရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါ။
iqoptions.eu သည်တရားဝင် iqoption.com ၀ ဘ်ဆိုဒ်မဟုတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါဖြေ - ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆောင်းပါးများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ အပေါ်က post (သို့) စာမျက်နှာရှိလင့်ခ်အချို့သည်တွဲဖက်လင့်ခ်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် link ကို နှိပ်၍ ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူပါကကျွန်ုပ်သည်တွဲဖက်ကော်မရှင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
© 2021 - IQ OPTION ပွဲစား - တရားဝင်မဟုတ်ဘူး | ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြော်ငြာခြင်းသည် 18+ သာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်သွယ်မှု / လောင်းကစားကိုတာဝန်ယူပါ။
အထွေထွေအန္တရာယ်သတိပေးချက် - ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြော်ငြာထားသောဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်သင်၏ရန်ပုံငွေအားလုံးဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်မဆုံးရှုံးနိုင်သောငွေကိုသင်ဘယ်သောအခါမျှမရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါ
လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အကောင့်များ၏ ၇၄ မှ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြသည် ဒီပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူ CFDs ကုန်သွယ်အခါ။ သင်၏ငွေဆုံးရှုံးမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးစွန့်စားနိုင်မလားစဉ်းစားသင့်သည်။ | မူပိုင်ခွင့်© 2021 | မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်